Mofon’aina – TALATA 11 APRILY 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – TALATA 11 APRILY 2017
Fanahy Masina, Jesoa, Voninahitr'Andriamanitra
16 Fa tsy nanaraka izay anganongano noforonin’ ny fahafetsen’ ny saina izahay, raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fihavian’ i Jesoa Kristy Tompontsika; fa efa hitan’ ny masonay ny fiandrianany.17 Fa nahazo laza amam-boninahitra tamin’ Andriamanitra Ray Izy, raha tonga teo aminy avy tamin’ ny voninahitra lehibe indrindra ilay feo nanao hoe: « Ity no Zanako malalako izay sitrako ».18 Ary renay io feo avy tany an-danitra io, raha niara-nipetraka taminy tany an-tendrombohitra masina izahay.19 Ary manana ny teny faminaniana atao mafy orina kokoa isika; koa raha mandinika izany hianareo, dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava ao amin’ ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazavan’ ny andro, ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik’ andro;20 fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin’ ny Soratra Masina dia tsy efan’ ny fisainan’ ny olona fotsiny ihany;21 fa tsy nisy faminaniana avy tamin’ ny sitrapon’ ny olona tany aloha rehetra; fa avy tamin’ Andriamanitra no nitenenan’ ny olona araka izay nitondran’ ny Fanahy Masina azy.
II PETERA 1 :16-21
I JESOA KRISTY EO AMIN’NY FIANDRIANANY
Ny mpanjakan’ny mpanjaka no ambaran’i Petera eto , izay efa naneho taminy ny fiandrianany (Mat 17 :2 ; Mar 9 :.2)
1-I Jesoa Tompon’ny voninahitra
Manambara ny fahalehibiazan’i Jesoa Kristy ny voninahitra , azy ny laza amam-boninahitra sy ny voninahitra lehibe indrindra (and 17). Nambaran’ Andriamanitra tamin’ny mpianatr’i Jesoa Kristy no Zanaka malalany izay sitrany. Tompon’izao rehetra izao sy ny fahefana ary ny fahalalana tsy hay refesina i Jesoa Kristy. Izy no zanakalahitokan’ny Ray hany afaka mamonjy ny olombelona mpanota ho tonga ao an-danitra.
2-I Jesoa Tompon’ny Teny
Tompon’ny teny sy ny faminaniana i Jesoa Kristy. Tsy misy mahay mamoaka ny hevitry ny Soratra Masina raha tsy tarihan’ny Fanahin’i Kristy (and 21). Ny fandinihana ny Soratra Masina no ahitan’ny olona ny Voninahitr’ Andriamanitra ao amin’ny fiandrianany. Izany ihany koa no mampizotra ny mino hanao ny tsara ankasitrahan’ny Tompo (and19). Ao amin’ny Soratra masina sy ny fitoriana ny Tenin’ Andriamanitra no itoeran’ny herin’ Andriamanitra amintsika . I Jesoa Kristy no manazava ny faminaniana sy mampiteny ny mpitory amin’ny toriteny tarihan’ny Fanahy Masina. Izy no mpitarika ny mpanompony ho vavolombelony amin’ny fitoriana ny Filazantsara. Tsy ataotao foana ny famoahana ny hevitry ny Soratra masina fa miaky fiomanana tsara.
Manana anjara toerana aminao tokoa ve ny Fanahy masina amin’ny fandinihana na fitoriana ny Soratra Masina ?